Wararkii ugu Dambeeyay Dagaalkii Damalla Xagare-COD • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wararkii ugu Dambeeyay Dagaalkii Damalla Xagare-COD
May 21, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Waxaa dagan xaalada deegaanka Damalla Xagare Ee koonfurta gobolka Sanaag kadib dagaal maanta halkaasi ku dhexmaray ciidamo Ka tirsan Puntland iyo ciidamo Somaliland ah kuwaas oo duulaan ahaa.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada duulaanka ahaa ee Somaliland oo ka yimid deegaanka Yubbe ay weerar ku qaadeen ciidamo galbinayay Wefdi uu horkacayay wasiirka Waxbarashada Puntland Cabdilaahi Maxamed Xasan kaas oo isla maanta booqasho u kuurgalid xaaladda waxbarasho ku tagay Damalla Xagare.
Wararku waxa ay sheegayaan in 9 askari oo kamid ah dhinacyadii is-farasaaray ay ku geeriyooden dagaalka walow ay soo baxayaan warar iskhilaafsan oo la xiriira tirada khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Mid kamid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Shire Maxamed Jaamac ayaa Horseed Media u sheegay in xiliga dagaalka uu dhacayay ka hor ay wefdiga wasiirka ka yimaadeen booqasho ay ugu tageen arday u fadhiday imtixaanaadka shahaadiga ee Puntland ,daqiiqado kadib booqashadana uu qarxay dagaalka.
Waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay gurmad u fidiyeen wasiirka iyo wefdiga la socday kadib markii uu qarxay dagaaalka waxaana uu sida uu hadalka u dhigay uu sheegay in jab xooggan uu soo gaaray ciidamadii Somaliland ee duulaanka ku qaaday wefdiga wasiir Cabdulaahi Maxamed.
Dhaawacyadii ka dhashay dagaalka ayuu sheegay in loo qaaday Cisbitaalka degmada Xingalool.